ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - ဂီတ
အဲဒါကိုမှကလေးမွေးဖွားပေးထားတဲ့ထူးခြားတဲ့တက်ကြွနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတွေများများစားစားဂီတများအတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကျော်ကြားသော ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အဟောင်းနှင့်အသစ်လာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့အရေးအပါဆုံးမြို့တ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ငါရီယိုအဟောင်းနှင့်အသစ်အခွက်တဆယ်ပြနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Samba, Forró, Jazz, Chorinho, Maracatu နှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ် rhythms ကိုအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးဂန္ဖျော်ဖြေပွဲနှင့် show, ပွဲတော်များနှင့်ပါတီများကအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် divulging, မြို့တော်ရဲ့လေးနက်တဲ့ဂီတသမိုင်းအတွက်အရေးကွီးပါယုဂ်စူးစမ်း LOVE ။
Music ကို Carioca ယဉ်ကျေးမှု၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် - နည်းတူအရေးကြီးတာကိုကမ်းခြေများနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသစ်တောများအဖြစ်ရီယိုအတွက်ဂီတမွို့၌အသက်တာ၏အသီးအသှငျအပွငျအမြစ်တွယ်နေ။
တစ်ဦးအသက်ရှင်တော်မူသည်ကြောင်းမြို့, ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ဂီတအတွက်ရွေ့လျားသကဲ့သို့, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့စည်းချက်မြတ်နိူးခြင်းနှင့်တေးရေးများအတွက်ဘုရားကျောင်းအဖြစ်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်လျှောက်လုံးသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် - ဘာသာရေး, ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ, အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနှင့်အသက်ပြည့်စုံသောလမ်း Related, ဂီတသစ်ကိုစည်းချက်နှင့်အခနျးကဏ်ဍကိုတွေ့ မြို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနေ့နှင့်ညဉ့်၌။
ထိုကဲ့သို့သောရီယိုအတွက်ဂီတ၏အရေးပါမှုကိုဖြစ်ပါတယ်, မြို့အစိုးရဆိုသလိုအခမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ပွဲတော်များစုစည်းနှင့် sponsor ကြောင်း: ပွင့်-and လာမယ့်အဆိုတော်အဖြစ်ကျော်ကြားဘရာဇီးနှင့်နိုင်ငံတကာကြယ်ဆိုသလိုမြို့တော်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖြစ်ရပ်များမှာကစား။ ထိုကဲ့သို့သော Rolling Stones အဖြစ်ကြယ်လှံတံ Stewart က, အက Black မျက်လုံး Peas, Lenny Kravitz, ဒါဝိဒ်သည် Guetta, Stevie Wonder, နှင့်ရောဘတ်တိုကားလို့စ်အားလုံး Copacabana သို့မဟုတ် Ipanema ကမ်းခြေပေါ်အခမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမှာဖျော်ဖြေကြပါပြီ - ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးစုဆောင်းပြီးအံ့မခန်းအောင်မြင်မှုရပျော်မွေ့။ ခပ်သိမ်းသောသစ်ကိုတစ်နှစ်ရဲ့အကြိုအခမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲအမျိုးမျိုးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကနေအဆိုတော်နှင့်ပရိသတ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးကြိုဆို, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အနှံ့အများအပြားနေရာများတွင်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
, ဒေသခံအမျိုးသားရေး, သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအဆိုတော်တွေနဲ့ဂီတပညာရှင်တွေ, အစဉ်မပြတ်အများကြီးလေးစားမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်ပေးထားကြသည် - ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်အများအပြားအရေးကွီးပါလမ်းတွေပေါ်မှာ, နည်းလမ်းနှင့်ပန်းခြံများမြင့်မားတဲ့ဒဏ္ဍာရီနှင့်မြူးအဖြစ်မှတ်ယူကြသူ Carioca ဂီတခေါင်းဆောင်များ, ပြီးနောက်အမည်ရှိသောကြသည်။
ဒေသခံနိုင်ငံတကာလေဆိပ်သူ့နောက်မှာဟုအမည်အဖြစ်အန်တိုနီယိုလို့ Carlos Jobim "Garota က de Ipanema" တမြို့လုံးအတွက်ရေးစပ်ဖြစ်နိုင်သည်အရှိဆုံးကမ္ဘာကျော်သီချင်းစာရေးဆရာ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့ပိုင်နက်ထဲမှာထွက်ရှိသမျှသောဧည့်သည်ကြိုဆိုနေဖြင့်လေးစားကြည်ညိုသည်။ Ipanema ၏မြေမှတ်တိုင်တို့ကိုခရိုင်ထဲမှာအများဆုံးအစဉ်အလာလမ်း၌တစ်ခုမှာViníciusက de Mora, တူညီတဲ့သီချင်း Co-စာရေးဆရာများ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းဖြတ်သန်းကားတစ်စီးနှင့်အတူ, သို့မဟုတ်ကြောင့်ငရုတ်ကောင်းမွို့မြောက်မြားစွာကာရာအိုကေအရက်ဆိုင်ထဲမှာနှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်လမ်းပေါ်အတွက်သီဆိုခဲ့သကြသည်။ ဒါဟာရုတ်တရက်ဘားမှာ, သဲသောင်ပြင်မှာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတရားမျှတမှာကိုယ့်ကိုပျော်မွေ့ခြင်းအဘို့အလူကြိုက်များသောသီချင်းမှသီဆိုကခုန်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့လူစုလူဝေးသက်သေခံရန်ရှားပါးသောမဟုတ်ပါဘူး။
အလားတူပင်ရီယိုရဲ့ကမ်းခြေအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်ဂီတမကြာခဏအသက်အရွယ်နှင့်အတန်းများအကြားကွာဟချက် - ပွဲတော်ကာလအတွင်း Samba ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူမှုရေးတန်းတူ, ထိုနှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးမကြာခဏလူငယ်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများမနာသီချင်းဆိုခြင်းနှင့်အတူတူပင်၏ခုန်နုန်းကခုန် တူညီသောနေရာများ၌သီချင်းတွေကို။
Cariocas ဂီတကိုချစ်ပြီးသူတို့၏မြို့ကိုချစ်ရ - ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်, Samba, မြောက်မြားစွာပါ pop သီချင်းစာသားတွေကိုအများအပြားနှင့် Bossa Nova သည့် Composition ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့, သို့မဟုတ်အံ့ဖွယ်စီးတီးသည်၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ကြ၏။ အများအပြားမေတ္တာလမ်းထဲမှာပုံဖော်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ဖြစ်နှင့်, အများဆုံးဂုဏ်ပြု Carioca မူဆယ်ဖြစ်ဆက်လက်သိရသည်။
ပြန်ကိုးရာစုအဆုံးမှချိန်းတွေ့, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့တွင်မွေးဖွားအကျော်ကြားဆုံးရစ်သမ်ကိုနိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားပွဲတော်နေ့ပှဲသဖြင့် ပို. ပင်ရေပန်းစား လုပ်. , Samba သည်။ သို့သော်, Jazzy Bossa Nova လည်းမြို့သူမြို့သားဖန်တီးနှင့် 1962 ခုနှစ်ထိခိုက်သောသီချင်းကို "Garota က de Ipanema" ကတည်းကကိုနိုင်ငံတကာအာရုံစိုက်မှုအများကြီးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ 1980 ခုနှစ်ရဲ့ရီယို၏ favelas တှငျမှေးဖှား Funk Carioca, ဒေသဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု၏အရေးပါသောနှင့်လူကြိုက်များ expression ကိုဖြစ်လာသည်။
Samba ကို Carioca လူမျိုး၏ဂီတဘဏ်ဍာတိုကျ၌ကြီးစွာသောကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးတည်းသာမက - တခြားပေါင်းဘော်ရောနှောနှင့်တီးလုံးဘဝကိုစိတ်ဓာတ်များ၏ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းဆောင်ကြဉ်းနှင့်ဤအလှနျပူမြို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖို့စိတ်ကိုဖမ်းစားနှစ်ဖက်ကိုဖော်ပြရန်အမျိုးမျိုး။
အဆိုပါပွဲတော်ကြီး Samba များအတွက်အချိန်ဖြစ်တယ်, Samba ကိုပွဲတော်ကြီး၏စကားသံဖြစ်ပါသည် - မရှိသေးပါ, ဒီရှငျးရှငျးလငျးလငျးတေးသွားကိုအားလုံးတစ်နှစ်ကြာမြင့်စွာသောမြို့ပတ်ပတ်လည်တွေ့ရှိရသည်။ Samba ဘရာဇီးရဲ့အမျိုးသားရေးသောအသံသည်, ထိုသို့သောအဆိုတော်သစ်တခုကိုဇာတ်ကောင်ကိုတင်ပြမယ့်ရေတိုရယ်စရာ monologue စေခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ရွတ်ဆိုစေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာဟာအလွန်အထူးသဖြင့်အရှိန်အဟုန်နှင့်အတူ Samba "Samba Breque ပြု" အဖြစ်မြောက်မြားစွာနဲ့အခြားစည်းချက်နှင့်ဂီတအသုံးအနှုနျးမြားသို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားလျက်ရှိသည် ဖွဲ့စည်းမှု၏အခြေအနေတွင်သတင်းစကား။ သီချင်းတစ် Samba ဗားရှင်းကိုရင်ခုန်စရာသီချင်းစာသားမှခုန်ခြင်းနှင့်ရွှင်လန်းလှည့်ကွက်နှင့်တကွ, 1950 ခုနှစ်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်အတော်လေးရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ထောက်ခံသူတစ်ဦးအားကြီးသောနံပါတ်, ထုတ်လုပ်သူနှင့်စားသုံးသူနှစ်ဦးစလုံးကိုစုဝေးစေတော်မူသော Samba Canção, "၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်းရည်ညွှန်း နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာ Samba ကြောင့်အများအားဖြင့်ထိုပွဲတော်ကြီးရာသီပြင်ပမှာတွေ့နိုင်သည်။ အကြောင်းမူကား,
Jazz နှင့်ပျော့ပြောင်းပြီး Samba စည်းချက်အကြားတစ်ဦးမြည်းကြိုးကိုဖြည်ရောနှောထံမှမွေးဖွား Bossa Nova ကမ္ဘာအဝှမ်းအနုပညာရှင်တွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှုတ်သွင်းခြင်း, ပစ္စုပ္ပန်နေ့ကဆက်လက်ထားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူခဲ့သည့်အထင်ကရ Carioca ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
"bossa" ဟု Carioca ရာလမ်းတစ်ဦးခြေစစ်ပွဲဖြစ်ပါသည်, နှင့် "Nova" ဟုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုတာကိုပြသအဖြစ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့်ခေတ်မီဆန်းပြား, နာမတော်ကိုမကိုယ်တိုင်က "ဂီတအောင်အသစ်တစ်ခုကိုအထူးလမျး" ကိုဆိုလိုသည်။ ဤသည်ကို 1950 ရဲ့ကမ္ဘာ့အမရှိသေးကြောင်းအမည်မသိတစ်ဦးခံစားချက်သယ်မယ်လို့သောစည်းချက်ဖန်တီးများစွာသောအခြားကြယ်နဲ့ဂီတမလွယ်ပါဘူးတို့တွင်မည်သို့ဇွာ Gilberto, တွမ် Jobim နှင့်Viníciusက de Mora ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအရစ်သမ်အားလုံးအနားချောမွေ့နှင့်ဥသုံနေရာချနိုင်သကဲ့သို့ဤအထူးလာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က, ထိုသို့ခံစားရပါတဲ့သူတွေအပေါ်ရှိကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါသည် - စံချိန်တင်နှစျယောကျခြင်းများစကားတို့ကို "Bo​​ssa Nova" တစ်ရဲ့နားရွက်မှလူတစ်ဦး၏နှလုံးသားများမှတက်စီးဆင်းလာရန်အဘို့အလုံလောက်တဲ့များမှာ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်, နွေးထွေးမှုနဲ့အရောင်ပြည်၌တစ်ပရိသတ်ကို: Copacabana ။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့လူသိများသောမိသားစု, မိတ်ဆွေတွေ, ရွှင်လန်းသောစုဝေးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပါတီများက Pagode နှင့်အတူဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်၏အဖိုးတန်အသံတွေ, Samba အပေါငျးတို့အများဆုံးချစ်သူတို့ဝိသေသလက္ခဏာများမှီဝဲခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ထားတဲ့ဟာအလွန်ကောင်းစွာကြိုက်တယ်ထောက်ခံဂီတစတိုင်, - စည်းချက်နှင့် ခံစားချက်နှင့်တစ်အသည်းအသန်သီချင်းဆိုအသေးစားနှင့်ကြီးမားသောလူအစုအဝေးပါဝင်ပတ်သက်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူသီချင်းစာသားများ, ။
ဒါကြောင့်ဂီတလူတိုင်းပျော်မွေ့မှကြွလာသောအခါ, Carioca လူမျိုး၏အထင်ရှားဆုံးယဉ်ကျေးမှုအစရိုက်များများထဲမှလူပေါင်းကောင်းသောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေချင်တဲ့တလျှောက်သီဆိုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ, ပါတီပူးပေါင်းမည်: အရစ်သမ်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်သကဲ့သို့ရီယိုအတွက်ဂီတ၏ gregarious သဘောသဘာဝအဓိကအရေးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်စည်းချက်ကို Favelas ကနေဆငျးသနှင့်ရေဒီယိုလိုင်းများနှင့်ညဉ့်ကလပ်အသင်းကျော်ယူပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကိုယ့် "Funk" အမည်ရှိသော, အ Funk Carioca ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စည်းချက်အီလက်ထရောနစ်, Samba, Hip-Hop နဲ့ Rap ဂီတကနေစည်းချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းပါဝင်သည်။ ဒါဟာအသက်အရွယ်နုပျိုသောလူအစုအဝေးအတွက်မှတ်မိလွယ်တဲ့သီချင်းတွေကိုနှင့်ထင်ရှားတဲ့အဆိုတော်မှကျေးဇူးတင်စကားအဖြစ်လောကရှိကခုန်ဂီတ၏အခြားကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒီအလာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က FUSE ကြောင်း DJ သမားရဲ့ကဖန်တီးပေါင်းဘော်ရောနှောသည်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ 160 ကျော်ရပ်ကွက်နေရာဖြစ်သည်ဖြစ်ပြီး, သဘာဝကျကျများစွာသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂီတ identity ကိုတီထွင် - ထူထောင်မှု, လူကြိုက်များဒေသခံ rhythms ကို, သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤဖြစ်ခြင်း။
တချို့ကရပ်ကွက်အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးကိုအလွတ်သဘောစားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်အချို့ကိုတွေ့ရှိရကြသည်ဘယ်မှာ Lapa, မြို့၏ bohemian အလယ်ဗဟိုအဖြစ်ဗုံဖြင့်မှတ်သားကြသည်။ အများစုက Cariocas နှင့်ဧည့်သည်များ Lapa ကခုန်၏ပျော်စရာအတွက် join ဖို့ရှေးခယျြနှင့်ရီယိုရဲ့ပျော်မွေ့ savoring ။ မြို့တစ်မြို့၏ဤမှတ်တိုင်အစိတ်အပိုင်းအတွက် Samba အပေါ်နေထိုင်ရာအကျော်ကြားဆုံးနှင့်အစဉ်အလာရိုးရာထူထောင်မှုအချို့ကိုတည်ရှိပြီးနေကြတယ်, လူတိုင်းကခုန်ပျားသဖြင့်ထွက်လာပါတယ်ရရှိဘယ်မှာ။
အခြားသောခရိုင်ကွဲပြားခြားနားသော ambiances နှင့်စတိုင်များကိုအာရုံစိုက် - Ipanema ရိုးရာအ Bossa Nova ထူထောင်မှုတစ်ခုအရေအတွက်နေရာဖြစ်သည်နှင့်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နေ့စဉ်သတင်းစာဖျော်ဖြေပွဲနေထိုင်ကြသည်။ ဒါ့အပြင် Ipanema အတွက်, ဧည့်သည်သမိုင်းကြောင်းနှင့်အကြီးမားဆုံးသောကိန်း၏ဘဝများနှင့်လာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်ကကိုယ်တိုင်ကထံမှစာအုပ်တွေ, မှတ်တမ်းများနှင့်အမှတ်တရရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအများအပြားယဉ်ကျေးမှုအစင်တာများနှင့်ဆိုင်များ, ဖြစ်ကြသည်။
ဘရာဇီးဂီတစက်မှုလုပ်ငန်း Self-ရေရှည်တည်တံ့သည်: ကြီးများအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးပေးထားသောသောပရိသတ်ကို၌ခပ်သိမ်းသောအရသာကိုအဘို့အရာတစ်ခုခုထုတ်လုပ်ရန်မှမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်လုံလောက်တဲ့ဂီတသမားများနှင့်တေးရေးဆရာရှိပါတယ်, ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းဘရာဇီးဂီတဒီတော့ကောင်းကောင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးလူသိများနှင့်အဘယ်ကြောင့်၎င်း၏အရည်အသွေးအမြင့်နှင့်၎င်း၏လက်မှတ်ဒါရှငျးရှငျးလငျးလငျးဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်တိုက်ရိုက်ဂီတမြို့တော်ရဲ့ကြီးမြတ် icon တွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သကြားမုန့်တောင်တန်း, ခရစ်တော်၏ရုပ်ထုကိုရွေးနှုတ်သောသခင်, သို့မဟုတ်နေသာ Copacabana ၏အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်လမ်းဘေးအဖြစ်ဂုဏ်ပြုဖြစ်ပါတယ်။
ဖျော်ဖြေပွဲသို့မဟုတ်အကြီးစားဂီတဖြစ်ရပ်များမြို့တော်ရဲ့ဂီတရှုခင်း့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း - တစ်အဆင့်၏အစအဦးကျင်းပနေအဘို့ဖြစ်၏ဖြစ်စေ, အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအားလပ်ရက်တစ်ဦးဘောလုံးအသင်းအောင်ပွဲများအတွက်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးပွဲတော်များကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်ပာုသိရှိရသည် Cariocas ဝမ်းမြောက်စွာသူတို့၏စိတ်နှလုံးကို join နှင့် အလိုအလျောက် choruses အတွက်စကားသံများ။
ရီယိုအတွက်ဂီတ Carioca ၏ identity ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် - ဒီဧည့်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်မြို့ရဲ့ဘဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်အဒေသခံများနှင့်အတူပိုမိုနက်ရှိုင်း connection ကိုဖန်တီးရန်ကိုနားလည်သဘောပေါက်။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့ဂီတယဉ်ကျေးမှုနှင့်အမွေအနှစ်တွေအကြောင်းနည်းနည်းသိမှတ်ကြလော့ဆို Carioca ထဲကအကြီးမားဆုံး, အပူနွေးဆုံးအပြုံးလိမ့်မယ်။
ပွဲတော်ကြီးမှတက်ဦးဆောင်လ၌ငါရီယို LOVE Samba ကျောင်းကခြစ်ခြစ်, ဝတ်စုံနှင့်သီချင်းတွေကိုနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစွမ်းသည်။
ဒါဟာအကောင်းဆုံးအလွန်ကြီးစွာသောမျက်မှန်မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်မည်သို့အပေါ်မြို့ခံများဧည့်သည်များအကြံပေးချက်များဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အချက်အလက်အားလုံးကိုကမ္ဘာ့ကျော်ကြားပွဲတော် သာ. ကြီးမြတ်ဥာဏ်နှင့်တကွစာဖတ်သူများကိုတပ်ဆင်ခြင်း, Samba နှင့်ပွဲတော်စစ်ရေးပြ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆည်းသည်။